Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ ỌrụOtu Ionic Ụdị Mkpokọta ikike mgbanwe meq/ml Ọdịnaya Mmiri Akụkụ urughuru mm Mbupu Ibu ibu g/l
DL 401 Macroporous Ploy-styrene nwere DVB Opaque okirikiri chaplet Iminodiacetic acid Na 0.8 55-65% 0.425-1.2 750
DL 402 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Ọkpụkpụ Ọdịdị White Aminophosphonic Na 0.9 55-65% 0.425-1.2 750
DL403 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Opaque okirikiri chaplet Methylglucamine Ntọala efu 0.9 50-60% 0.425-1.2 750
DL 405 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Opaque okirikiri chaplet Thioureido H 0.8 45-50% 0.425-1.2 750
DL 406 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Ọkpụkpụ Grey Opaque Spherical Al 0,5 50-55% 0.30-1.20 750
DL407 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Ọkpụkpụ Ọdịdị White RN (CH3)2(C2H2OH)- Cl 0.9 50-56% 0.30-1.20 700
DL408 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Brick Red na Brown Spherical Beads FeO (OH) 0.6 50-56% 0.30-1.20 700
DL410 Poly-Styrene macroporous nwere DVB Opaque okirikiri chaplet Ammonium nke anọ Cl 0.75 40-50% 0.30-1.20 700
Na mkpokọta, resin nwere ogo njikọ njikọta nwere nhọrọ siri ike na ion, yana nhọrọ nke resin macroporous dị ala karịa nke ụdị resin gel. Nhọrọ a ka ukwuu n'ime ihe na -agbanwe agbanwe yana pere mpe n'ime ihe a tụkwasịrị uche.
A na -eme resin macroporous site na ịgbakwunye porogen na mmeghachi omume polymerization iji mepụta usoro nke ogbo sponge, nke nwere ọtụtụ micropores n'ime, wee webata otu mgbanwe. Enwere ike ịchịkwa nha na oke nke resin mmiri mmiri n'oge nrụpụta. Elu elu nke ọwa nwere ike ịbawanye karịa 1000m2 / g. Nke a abụghị naanị na -enye ọnọdụ kọntaktị dị mma maka mgbanwe ion, na -ebelata ogologo mgbasa nke ion, kamakwa ọ na -abawanye ọtụtụ ogige na -arụ ọrụ. Site n'ike van der Waals n'etiti ụmụ irighiri ihe, ọ nwere ike mepụta mgbasa ozi molekụla, nke nwere ike ịkwasa ụdị ihe ọ bụla na-abụghị ionic dị ka carbon na-arụ ọrụ ma gbasaa ọrụ ya. Ụfọdụ resins macroporous na -enweghị ndị otu na -arụ ọrụ na -arụ ọrụ nwekwara ike mgbasa ozi wee kewaa ihe dị iche iche, dị ka phenols na mmiri mkpofu kemịkalụ kemịkal.
Mgbe ọdịnaya nnu nke mmiri dị elu dị elu, enwere ike iji electrodialysis, osmosis na usoro ndị ọzọ maka mbibi mmiri ndu.
Osisi adsorption chelating ọdọ mmiri nwere ụdị kristal na ihe polymer CSP. Ọ dabara nke ọma maka ogwe mgbidi ka ọ bụrụ nchekwa nke ọkpọkọ ikuku, ikpokọta ọkpọ na panel nleba anya na sistemụ. N'ihi itule mgbasa ozi nke oghere mmiri RF dị n'elu, enwere ike belata ọnụ ụlọ ahụ, enwere ike ịhazi nsonaazụ nke nrụpụta arụmọrụ, sistemụ mmepụta osisi na sistemụ mgbapụta n'ụzọ ziri ezi n'akụkụ ndị a.
Ọzọkwa, mbubata osisi na -enye ụdị nrụgide maka ọgwụgwọ mkpuchi elu, nke na -abụghị naanị na -enyere aka ịchịkwa ọnụ ahịa mgbasa ozi na nguzogide mmiri, kamakwa ngwaahịa nke nchedo gburugburu ebe obibi n'ime obodo mepere emepe, na ojiji nke abụọ ka ukwuu. ezigbo.
Nke gara aga: Resin mgbanwe anion adịghị ike
Osote: Resin mgbanwe resion siri ike siri ike